१७ फाल्गुन २०७६ शनिबार
“कोरोनाको शंका लागेर अस्पताल भर्ना भएको फान्जाङ (क्याप्‍टेन) हिजो साँझ बितेछ ।” बिहानै साथीले फोन गर्‍यो ।
“फान्जाङ र मेरो काम गर्ने ठाउँ सँगै छ । काम पनि एउटै हो । अस्तिको दिन त हो फान्जाङ र मैले सँगै काम गरेका । ऊ तन्दुरुस्तै थियो ।” साथी बोलिरहेछ, म सुनिरहेछु ।
“फान्जाङको शोकमा कारखाना छुट्टी होला कि भन्ने लागेको थियो तर भएन । हामी कामदारहरूको मेडिकल चेकअप गराउने होलान्, कारखानामा दबाइ छर्केलान्, सफा गर्लान् झैँ लागेको थियो । त्यो पनि भएन । बरू मेसिन बिग्रँदा काम रोकिन्छ । मान्छे मर्दा नरोकिदो रहेछ ।” उसले हिक्क गर्‍यो ।
“अस्ति फान्जाङले आधा गरेर छाडेको काम अब मेरो भागमा आइलागेको छ । अस्ति उसले लगाएका पञ्जाहरू अब मैले लगाउनुपर्ने भएको छ । अस्ति उसले प्रयोग गर्ने 'सेफ्टी टुल्स' हरू अब मैले प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । अस्ति उसले छोएका सामानहरू अब मैले छुनुपर्ने भएको छ । अस्ति उसले लगाएको एप्रोन अब मैले लगाउनुपर्ने भएको छ । अस्ति उसले उचालेका सामानहरू अब मैले उचाल्नुपर्ने भएको छ । म कसरी गर्न सक्छु र त्यही काम ? तर, मलाई गर्दिन भन्ने छुट छैन । तत्काल कारखाना छाडिहाल्ने अवस्था पनि छैन । छाडिहाले पनि काम पाउन सकस पर्छ । यतिखेर मलाई ती सामानहरू छुन डर लागिरहेछ । मलाई काम गर्न डर लागिरहेछ । फान्जाङले छोएका तिनै सामानहरू त्यही पानीमा पखालेर म कसरी सुकाउन सक्छु र ! भन् त गणेश, म कसरी गर्न सक्छु ? भन् त भन् अब म कसरी गरौं ?” ऊ रून थाल्यो ।
मैले पनि आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ । फोन काटिदिएँ ।
केही दिन अघिको कुरा हो, अर्को एउटा साथीको कारखानाको छिगेछा (फोरक्लिफ्ट) चालक कोरोनाकै कारण बितेको थियो । सँगै काम गर्ने सहकर्मी बितेपछि काम छाडेर नेपाल फर्किन खोजेको ऊ टिकट नपाएर अझै भौतारिइरहेको छ ।
मैले थेगुका अरू पनि केही साथीहरूलाई सम्पर्क गरेँ । यदाकदाबाहेक प्रायः सबैको काम निर्वाध चलिरहेको रहेछ । मेरो पनि हालत उस्तै छ । हिजैमात्र छुट्टीमा नेपाल जान भनेर तयार भएको साथीलाई विभिन्न बहाना देखाएर टिकट रद्द गरिदिएको थियो कारखानाले ।
कोरियनहरू श्रममा विश्वास गर्ने भएर हुन सक्छ अथवा भेडोपन, जे भनेपनि प्रायः उद्योगहरू निर्वाध चलिरहेका छन् । मानौँ केही भएकै छैन ।
पछिल्लो एक हप्तादेखि कोरिया कोरियाजस्तो छैन । कोरिया रहर हैन, कहर भएको छ यतिबेला । यहाँको सामान्य जीवनशैली अब असामान्य बनिसकेको छ । अति ब्यस्त हुने सडकहरू रित्ताप्रायः भैसकेका छन् । पाइलो टेक्ने ठाउँ नहुने मेट्रो रेलहरू अब खाली खाली गुडिरहेछन् । टनाटन हुने पार्कहरू रित्ता देखिन्छन् ।
मुख्य संक्रमण फैलिएको थेगु सहरका ठूलठूला सपिङ कम्प्लेक्सहरू बन्द छन् । मार्टहरू बन्द छन् । चर्चहरू बन्द छन् । बेलाबेला सडकमा एक्बुलेन्सहरू मात्र कुदिरहन्छन् । खाद्य पदार्थहरूको लागि स-साना मार्ट तथा फेमिजमहरूमा चित्त बुझाउनुपर्ने भएको छ । दैनिक उपभोग्य सामानहरू बिस्तारै नपाइने पो हो कि भन्ने भय सिर्जना हुन थालेको छ । करिब ६ करोड जनसंख्या भएको कोरियामा भोकमारी लागे के होला ? अर्को भय सुरु भैसकेको छ ।
सडकमा निर्वाध हिँडडुल गर्न पनि डर लाग्न थालेको छ । बाटामा कसैले ख्वाक्क खोकेको सुने, कसैते थुक्क गरेको देखे बाटो परिवर्तन गर्न मन लाग्छ । कतै कोहीसँग ठोक्किए मन चिसो हुन्छ, लगाइराखेका आफ्नै लुगा फुकालौं झैँ लाग्छ । वृद्धवृद्धाहरूमा संक्रमण चाँडो फैलने हुँदा उनीहरू हिँडेको बाटो हिँड्नै मन नलाग्ने भएको छ । पसलमा केही किनेर खाइहाल्न आँटै आउँदैन । तिर्खा लागे सर्वजनिक धारामा पानी पिउन मन लाग्दैन ।
कोरिया सरकाले अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर हिँडडुल गर्न निषेध गरेको छ । नचिनेका मान्छेसँग देखभेट, बोलचाल नगर्न अनुरोध गरेको छ । जताततै चेकजाँच र निगरानीहरू बढाएको छ । बाटामा कसैले माक्सहरू वितरण गरे, अथवा चर्चका प्रतिनिधिले बाटामा बसेर सेफ्टीको लागि भन्दै दिएका दबाइहरू नलिन तथा प्रयोग नगर्न भनिएको छ । मोबाइलमा इमर्जेन्सी अलर्टहरू आइरहन्छन् । सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल कोरोनामय छन् । यसो हुँदा भय झन् बढ्ने रहेछ ।
काम गर्दागर्दै पनि कसैले नबोलाइदिए हुने । कोही छेउछाउमा नआइदिए हुने । काम अह्राउनेहरूले परैबाट हातकै इसाराले अह्राइदिए हुने जस्तो लाग्छ । सिक्ताङ(किचन) मा सबैसामु बसेर खानपनि मन लाग्दैन । अरूले लामो श्वास फेरेपनि तर्किन मन लाग्छ । त्यतिमात्र हैन कोठाकै सहकर्मी साथीहरूका छेउछाउ जान पनि डर लाग्छ । काम गर्दागर्दै न कसैसँग 'टच' पो गरेँ कि ? कसैले हाच्छ्युँ गर्दा आसपासै पो थिएँ कि? मास्क पो नलगाई काम गरेँ कि ? कतै बाहिरबाट आएकाहरूले भाइरस पो बोकेर आए कि ? तर्सिरहनुपर्छ ।
काम गर्दा, हिँडडुल गर्दा त मास्क लगाइन्छ । होस्टेलमा धेरैजनालाई एउटै कोठामा राख्ने भएकाले कोठामा बस्दा पनि निसास्सिनेगरी मास्क लगाइराख्नुपर्छ । हात धोएको धोएकै गर्नुपर्छ । ड्रेस चेन्ज गरिरहनुपर्छ । साथीहरूले प्रयोग गरेका सामानहरू छुन डर लाग्छ । सबैको अनुहार मलिन देखिन थालेको छ ।
दिन दुई गुना रात चार गुना केभिड १९ का संक्रमितहरू बढिरहेछन् । र, यही अनुपातमा वृद्धिदर बढिरहे संक्रमणले महामारीको रूप लिने निश्चितप्रायः छ ।
कोरिया सरकारले जति नै उच्च सतर्कता अपनाए पनि कोरियन नागरिकहरुभने खासै सतर्क भएको पाइँदैन । हेलचेक्र्याईं गर्छन् । मास्क लगाउँदैनन् । खाख–खाक खुक–खुक गरिरहन्छन् । ढाप मारिरहन्छन् । सामुन्नेमा आएर ह्वास्स श्वास गनाउनेगरि बोलिरहन्छन् । सतर्क हुन अनुरोध गर्दा अहिल्यै मर्दैनस् भनेर उल्टै जिस्क्याउँछन् । कफी, पानी, खानामा जुठो मिसाइदिइहाल्छन् । रक्सी खाने, होहल्ला गर्ने गरिरहन्छन् । सरकारले सचेतनाका लागि अनेक कामहरू गरिरहँदा शतप्रतिशत साक्षर कोरियनहरूमा सचेतना भने शून्य जस्तै लाग्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा अनेक समाचारहरू आइरहन्छन् । भ्रामक समाचार र भ्युअरको लोभले बनाइएका झुटा भिडियोहरू हेरेर बुझ्दै नबुझी घर परिवारका सदस्यहरूले तर्साइरहन्छन् । ‘यतिजना बिरामी भए, उतिजना मरे’ भनेर बारबार आउने समाचारहरूले भय अझै बढ्दै जाँदो रहेछ ।
भय कम गर्न भनेर साथीहरूलाई सम्पर्क गर्दा उनीहरू झन् भयभित भेटिन्छन् । सबैलाई अब के होला भन्ने पिर छ । तत्काल घर फर्कन चाहनेहरूको लागि टिकट अभाव छ । कतिपयको कारखानाले घर फर्कन छुट्टी दिइरहेका छैनन् । नेपाल सरकारले अहिलेसम्म आफ्ना नागरिक फर्काउने विषयमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।
भय, त्रासले आत्मबल कमजोर हुदै जाँदो रहेछ । त्यसै पनि आत्महत्या बढी हुने कोरियामा कोरोनाको भयले आप्रवासी कामदारहरूमा डिप्रेसनको खतरा ह्‍वात्तै बढ्ने देखिन्छ । भाइरसले भेटिहाले के गर्ने ? धेरै अन्योलमै छन् । दूतावासले सुरक्षित रहनुहोला भन्ने वक्तव्य निकालेर पन्छिन खोजिरहेको छ । अरु बेला विभिन्न बहानामा अर्थ संकलन गर्ने सामाजिक संघ संस्थाहरू गुमनाम छन् । आफ्नो देश भनेको आफ्नो हौसला रहेछ । राज्यसत्ता निरिह हुँदा भय झन् बढ्दो रहेछ ।
यति हुँदाहुँदै पनि कोरियामा रहेका नेपालीहरूको अवस्था भयभित भने भैसकेको छैन । नेपालमा भन्दा कोरियामा उपचार राम्रो र प्रभावकारी छ । कोरोनाको मृत्युदर कम भएकाले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । व्यक्तिगत सरसफाई तथा सुरक्षामा ध्यान दिए संक्रमणबाट केही हदसम्म जोगिन सकिन्छ । अनावश्यक हिँडडुल नगर्ने, माक्स लगाइरहने, तातो पनी पिइरहने गर्नाले पनि भाइरसबाट जोगिन सकिन्छ । ल्वाङ मरिच, दालचिनी, बेसारपानीको प्रयोगले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सक्छ । कोरोनाको हकमा रोग प्रतिरोध क्षमता नै अहिलेसम्मको एकमात्र दबाई हो । त्यसैले यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । अल्कोहलले भाइरस मर्ने भाअएकाले रक्सी पिउनुपर्छ भन्ने हल्ला चलेको छ । भ्रामक हल्लाको पछि लाग्नु हुँदैन ।
मनोबल घट्दै गए शरीरको रोग प्रतिरोग क्षमतामा ह्रास आउँछ । योग गर्नाले पनि भय कम गर्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक समाचारहरू हेर्नु भन्दा मोटिभेसनल भिडियोहरू हेर्नु हितकर देखिन्छ ।
स्वास्थ्य भन्दा ठूलो केही छैन । रूघाखोकी, ज्वरो तथा श्वास प्रस्वाससम्बन्धि समस्याहरू भए तत्काल अस्पताल जानुपर्छ । कोरोना लागिहाले वैधानिक तथा अवैधानिक आप्रवासी कामदारहरूलाई कोरिया सरकारले निःशुल्क उपचार गर्छ ।
अन्त्यमा, कोरियामा रहेका नेपालीहरूका घर परिवार तथा आफन्तहरूलाई भ्रामक समाचारहरूको पछि नलाग्‍न र नआत्तिन अनुरोध छ । बरू तपाईंहरू पनि आफ्ना आफन्तहरूको मनोबल बढाइदिनुस् । केही हदसम्म भए पनि भय कम हुन्छ । अहिलेसम्म कोरियामा रहेका आप्रवासी कामदार तथा विद्यार्थीहरू सुरिक्षत छौं । विदेशीहरूको हकमा मंगोलियाका एकजना बाहेक कसैलाइ पनि केभिड भाइरसको संक्रमण देखिएको छैन ।
कोरियामा कोरोनाको मुख्य प्रभावित क्षेत्र थेगुमा मात्र १० हजार बढी नेपाली कामदारहरू रहेको अनुमान छ । थेगुमा दुई हजार बढी बिरामी भेटिएका छन् । लेख तयार पार्दासम्म कोरियामा २९३१ जना केभिड १९ का बिरामीहरू भेटिइसकेका छन् । मृत्यु हुनेहरूको संख्या १६ छ भने २७ जाना निको भैसकेका छन् । कोरियामा करिब ५० हजार नेपालीहरू कार्यरत छन् भने विद्यार्थीहरू पनि छन् ।